Ah, ulwandle! Yeka indlela okumnandi ngayo, nokuthi njalo ngonyaka sifuna ukukubona kanjani futhi siguqule amaza ayo afudumele, anomsindo! Ukuphumula olwandle akuzuzisi nje kuphela umphefumulo, kodwa futhi nomzimba, ngoba umcebo wamanzi olwandle ukhona usawoti oqedwa kuwo. Ukwawoti olwandle ludume kakhulu ngenxa yezinto zalo zokwelapha cishe kusukela abantu baqala ukufunda leli zwe. Idalwe yimvelo ngokwayo, ukuqoqa inani elikhulu lamaminerali kanye nezici zokulandelela, okuwusizo ebantwini.
Esikhathini sethu, usawoti usolwandle ungathengwa cishe noma yiliphi ikhemisi noma ngisho nasezikhungweni ezihlukahlukene zokudla, futhi lokhu akudingeki uhambe kude. Kunzima ukugcizelela ukubaluleka kosawoti olwandle ngomzimba womuntu, ngoba ungasetshenziswa ezimweni ezehlukene. U-usawoti olwandle, akuyona i-panacea yazo zonke izifo nezifo, kodwa iyoba nemthelela emlonyeni ngempela emzimbeni wakho, ukuyihlanza nokuyiqinisa ngemandla emilingo yemvelo.
Kunconywa ukupheka usawoti usawoti. Idlula ikhwalithi yetshe evamile yamanzi, ngoba iodini equkethwe kuyo imvelo, futhi usawoti esiwazi kahle kufanele ugcwale iodine ngokuhlakanipha. Yiqiniso, usawoti wolwandle kufanele udliwe ngendlela efanayo negumbi lokudlela ngamanani alinganisiwe, ngaphandle kwalokho impilo ingalimala esikhundleni esihle. Ngaphandle kwembonini yokudla, usawoti usawoti uyoba umsizi omkhulu kuwe ngesikhathi sofuba lomkhuhlane kanye nezifo ezihlukahlukene zokuphefumula.
Hlanganisa ithisipuni 1 selwandle usawoti emgodini wamanzi afudumele bese ugeza ngalesi sixazululo somphimbo nekhala. Umphumela ngeke ukwenze ulinde isikhathi eside, futhi emaminithini ambalwa uzokwazi ukuphefumula kalula futhi ngokukhululekile, futhi kusukela ekuphumeni kwempumu ngeke kube khona umkhondo. Uma ungowalesi sigaba sabantu abanamaphiko avuvukala njalo kusihlwa futhi balala nazo zonke izinto, khona-ke usawoti olwandle lwesimangaliso luzokusiza futhi. Yifake emgodini ngamanzi afudumele, faka imilenze yakho ekhathele kuyo, yibambe imizuzu eyishumi, futhi ngeke kube khona ukukhathala nokukhululeka. Ngaphambi kokulala, kunconywa ukuba ugeze umzimba ozohlanza umzimba futhi usize ukukhohlwa ngezinkinga, unikeze ukuphumula okungenakulibaleka. Ngendlela, usawoti wokugeza usawoti nawo uyasiza. Kunconywa kubantu abaningi.
Usawoti olwandle lufaka isandla esikhulu kwi-cosmetology yezwe, eqala njalo ngonyaka. Ama-osmetics anamuhla, aqukethe usawoti olwandle, ayaziswa kakhulu ngabathengi abaningi, ngakho-ke athengiswa ngokushesha. Kodwa lezi zinqubo noma ezinye izimonyo zingenziwa ekhaya, futhi ngesikhathi esifanayo ungagcina imali ehloniphekile yokuthengwa kwama-creams abizayo nama-shampoos. Usawoti olwandle luzosiza ukuqeda imibimbi esikhunjeni somuntu, izipikili ezinamahloni kanye nezinwele ezihlukanisayo. Okusho ukuthi, kusetshenziselwa ukutakula umuntu, okubalulekile, unikeze izindleko zayo eziphansi.
Ukuthenga usawoti olwandle, uma ungenayo kakade, futhi kuzokusiza ukuqeda izinkinga eziningi zezempilo. Isikhwama esinamaphilisi okuphulukisa okunjalo kumele sibe kuzo zonke izindlu, kuthuthukise izindlu ezinamandla emvelo. Sebenzisa usawoti usawoti ngendlela oyifunayo, ufike nezindlela zakho zokupheka impilo kanye nokuphila isikhathi eside ngaleli thuluzi elimangalisayo futhi umphumela omuhle ngokuqinisekile uzokujabulisa! Njengoba sibona kukho konke okushiwo ngenhla, usawoti usawoti, okwakhiwa kwawo okuhlukahlukene futhi ogcwele amaminerali, udlala indima ebalulekile ekuphileni komuntu. Futhi uma ucabangela iqiniso lokuthi inani lalo alilona eliphakeme kakhulu, liyisici esibalulekile ekuphileni komuntu wonke. Sebenzisa ngokugcwele izipho zemvelo futhi ube nempilo!